Mai Chibwe VekwaZimuto: Vabereki Pamusha peVana vakaroorana
Toda kumboongorora nyaya yokugarisana nevabereki vemukadzi kana kuti vemurume mese muripo pamusha pamwe muri kumusha pamwe muri mutaundhi pane imba imwe chete. Mitemo yokugarisana inofamba sei kuti pasaita kupokana.
Chokutanga ngatihwisise kuti vabereki vavana vanoroorana mazuvano vabereki vava mumakore anongira kuma 45 achikwira. Tadaro tinoonazve kuti kune vanhu vanoroora nokuroogwa vava kumakore anoita 30. Ukatarisa varume vakashaikigwa nevakadzi kana kurambana nevakadzi ivo vava kumakore 50 kana kupfuura unoona vachitoda kuroorazve uye kuzvarisana. Izvi zvinoreva kuti vachiri kuvana mudzimba dzavo asi ivo vave nezvizukuru. Ndipo panobva nyaya yese inokwanisa kutadzisa vanhu kugarisana nevana.
Kana mai nababa vako vakushanyirai, ngavashanye havo asi ngavazive kuti magarire apamusha wenyu anochinja kusvika vadzokera kwavo.
Tiri kuenderera mberi nenyaya yedu. Toda kuyananisa vabereki nevana pamusha.
Vana vakaroorana vanovata sei uye vanoita ruzha pakuvatana sei? Ko ivo vaberekivo vakagara vhiki mbiri varipo zvinoita here kuti vahwkwe vachivatana?
Ndinhohwa vanobvunza vachibvunza kuti voita sei navamwene vasina hanya nokuti muroora anofanira kufadza murume wake mwana wavo. Vanongoona sokuti mwana wavo mwana mudiki asinei nezvokuti ane mhuri.
Vane zvokutaura taurai tihwe.
Posted by Mai E Chibwe at 06:57